Off-Line On-the-Fly Myanmar Font Converter: 2008
Off-Line On-the-Fly Myanmar Font Converter
It's first Off-Line On-the-Fly Myanmar Fonts Converter
ယူနီကုတ် ၅.၁ အပြောင်းအလဲ အတွက် ဆွေးနွေးခြင်း
အားလုံးအတွက် လိုအပ်နေတယ်ထင်လို့ ပြောတာပါ။ ကွျန်တော် Comment ကို Moderate မလုပ်ပါဘူး။ မကျေနပ်ရင်လည်း ဆဲသွားနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်က ကိုတာ ရေးတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ဥပမာတစ်ခု ကွျန်တော် အမြဲတမ်း မှတ်မိနေပါတယ်။
ဖားတစ်ကောင်ကို အရမ်းပူနေတဲ့ ရေနွေးအိုးတစ်အိုး ထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ဖား က အပူဒဏ်ကို မခံနိုင်လို့ ခုန်ထွက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖားကို ရေအိုးတစ်အိုးထဲထည့်ပြီး အောက်ကနေမီးမြိုက်တဲ့အခါမှာ ရေက တဖြည်းဖြည်းပူလာတဲ့အတွက် ဖားအတွက် မသိသာပဲ နောက်ဆုံးမှာ ဖား သေသွားပါတယ်။ အဓိက ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းက ကွျန်တော်တို့အတွက် ပြသနာ အကြီးကြီးတစ်ခုကို နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ကြုံလိုက်တဲ့အခါမှာ ရုတ်တရက် ပြသနာအနေနဲ့ သိပြီး ရုန်းထွက်ဖို့ ကြိုးစားကြပေမယ့် မဖြစ်လောက်တဲ့ ပြသနာအသေးအဖွဲကလေးတွေကို တွေ့တဲ့အချိန်မှာ ဒါပြသနာ မဟုတ်သေးပါဘူးလေ ဆိုပြီး ဖြေရှင်းဖို့ မကြိုးစားကြပါဘူး။ အဲဒီအတွက် ပြသနာကတဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတဲ့အခါမှာ ကွျန်တော်တို့ ဖြေရှင်းလို့မရနိုင်အောင် ဖြစ်ကြရပါတယ်။
မလုပ်သင့်တာကို လုပ်မှ မှားတယ်လို့ ပြောလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်သင့်တာကို လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အချိန်မှာ မလုပ်ရင်လဲ မှားတာပါပဲ။ အခုလက်ရှိ ဇော်ဂျီကို သုံးနေတဲ့ User တွေအားလုံးဟာ ရေအိုးထဲထည့်ပြီး တဖြည်းဖြည်း မီးမြှိုက်ခံနေရတဲ့ ဖားတွေလိုပါပဲ။
အနာဂတ်မှာ ဘာပြသနာတွေ ရှိလာနိုင်လဲ
လူတိုင်း ပြောနေကြတဲ့ အကြောင်းကတော့ Searching နဲ့ Sorting ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီ Searching နဲ့ Sorting က သာမန် အသုံးပြုသူတွေအတွက် အကြီးအကျယ်မထိခိုက်နိုင်ပါဘူး။ ကွျန်တော့် အမြင်အရ အဓိက ပြသနာက Localization နဲ့ Normalization ပါ။ တစ်ချိန်ချိန်မှာ Database တွေက သူတို့ အထဲမှာ Store လုပ်တဲ့စာတွေကို Unicode Scheme နဲ့ Normalize လုပ်ပြီး သိမ်းလာနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပဲ Firefox, Thunderbird လို ဆော့ဖ်ဝဲတွေ၊ Microsoft Word, Excel, Outlook လို ဆော့ဖ်ဝဲတွေက UTF-8 နဲ့ ရိုက်တဲ့စာကို Unicode Scheme နဲ့ Normalize လုပ်ပြီး Display လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင် ယခုလက်ရှိ ဇော်ဂျီသုံးတဲ့ User တွေ ပြသနာ အကြီးအကျယ်တက်နိုင်ပါတယ်။ ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းက Software တိုင်းကို Workaround လုပ်ပြီး သုံးဖို့ ပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီနည်းလမ်းက လူတိုင်းအတွက် အဆင်ပြေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက ကွျန်တော်တို့လည်း သူများတွေနည်းတူ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေကို Localize လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ Software Community အကြီးစားတွေက Unicode Standard မဟုတ်တဲ့ ဖောင့် နဲ့ Localize လုပ်တာကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အားလုံးကို အင်္ဂလိပ်လိုသုံးပြီး ဘာသာမပြန်ပဲ နေရုံပဲရှိပါတယ်။
User များဖက်မှ စဉ်းစားခြင်း
User တွေဖက်က ဘယ်လိုစိုးရိမ်မှုတွေ ရှိသလဲဆိုတာ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားကြရအောင်။
ဥပမာ Blogger တစ်ယောက်ဆိုပါစို့။ သူ့ရဲ့ ဘလော့ခ်ကို Unicode 5.1 နဲ့ ပြောင်းပြီးရေးမယ်ဆိုရင် သူ့ဆီကို လာဖတ်တဲ့ စာဖတ်သူအရေအတွက် လျော့သွားမှာ စိုးရိမ်တာ ပထမဆုံး အချက်ပါပဲ။ နာမည်ကြီးဘလော့ဂါမဟုတ်ရင် ဘယ်သူမှ အပင်ပန်းခံ Font အသစ် Install လုပ်ပြီး ဖတ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နာမည်ကြီး ဘလော့ခ်တွေ မှာတော့ Advantage ရှိပါတယ်။ ဥပမာ - မိုးမခ ဘလော့ခ်ဆိုရင် BIT Font သုံးထားပေမယ့် သူ့ရဲ့ Popularity က လျော့မသွားပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူ့အတွက် အမာခံ ပရိသတ် ရှိပြီးဖြစ်လို့ပါ။
Forum လုပ်တဲ့သူတွေဖက်က စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်။ ဖိုရမ်ဆိုတာ အများအားဖြင့် ပရိသတ်အမာခံ ရှိပြီးသားပါ။ သူတို့ သုံးချင်တဲ့ဖောင့် သုံးလို့ရပါတယ်။ သူတို့ သုံးတဲ့ ဖောင့်ကို သူ့ပရိသတ်က လိုက်သုံးမှာပါပဲ။ ဥပမာ - Native Myanmar ဆိုရင် Win Kalaw လို အသုံးမများတဲ့ ဖောင့်သုံးထားပေမယ့် အားလုံးက Win Kalaw လိုက်သုံးကြတာပါပဲ။ Myanmar Cupid ဆိုရင် Myanmar Cupid Font Pack ဆိုပြီးတော့တောင် Download လုပ်ဖို့ ပေးထားလို့ User တွေက Download လုပ်ပြီး သုံးကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဖိုရမ် Moderator တွေရဲ့ စိုးရိမ်မှုက Unicode ပြောင်းသုံးတဲ့ အတွက် Display ပြသနာဖြစ်မှာ၊ တစ်ချို့ဖိုရမ်တွေမှာဆိုရင် Interface တွေ အကုန်လုံးက Localize လုပ်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် Unicode ပြောင်းရင် Localize ပြန်လုပ်ရမှာ စတဲ့ပြသနာတွေပါ။
ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောနေမယ့်အစား လက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားကြရအောင်ပါ။ ကွျန်တော် စဉ်းစားမိသလောက် ပြောပါမယ်။ တစ်ခြားစဉ်းစားမိတာရှိရင် ထပ်ဖြည့်ကြတာပေါ့။
ပထမဆုံး အဆင့်အနေနဲ့ ဘာကြောင့် Unicode 5.1 ပြောင်းသုံးသင့်သလဲဆိုတာ User တွေ သိအောင် ပညာပေးဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီတော့ အားလုံးဝိုင်းစဉ်စားပြီး အနာဂတ်မှာ ဘာပြသနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်၊ ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရလာနိုင်တယ်ဆိုတာ ဝိုင်းစဉ်းစားပြီး စာရင်းပြုစုဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ User တွေအတွက် Conversion မှာ အထောက်အကူပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖိုရမ် Administrator တွေအတွက် MySQL Conversion Tools တွေ၊ Blogger တွေအတွက် အလွယ်တကူ Convert လုပ်နိုင်မယ့် Tools တွေလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက Unicode 5.1 Keyboard Layout ကို အကွျမ်းတဝင်မရှိတဲ့ User တွေအတွက် ဇော်ဂျီ ကီးဘုတ်နဲ့ Unicode 5.1 Display တွဲထားတဲ့ Keyboard Driver မျိုးပါ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အပိုအနေနဲ့ PHPBB Localization, Fusion Localization လို လူသုံးများတဲ့ ဖိုရမ်ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို မြန်မာလို Localize ကြိုလုပ်ထားနိုင်ရင် User တွေအတွက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။
တတိယအဆင့်အနေနဲ့ Public Campaign လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ Campaign လုပ်ရတာ အပြင်မှာ လုပ်ရသလောက် မခက်ပါဘူး။ နာမည်ကြီး ဘလော့ဂါတွေ ကစလုပ်ရင် နောက်လူတွေ အားလုံးလိုက်လုပ်ကြမှာ သေချာပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ User တွေကို ကွျန်တော်တို့ ပထမအဆင့်က စာရင်းပြုစုထားတဲ့ အချက်တွေ ၊ ဒုတိယအဆင့်မှာ ကွျန်တော်တို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ Tools တွေနဲ့ User တွေကို Unicode 5.1 ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ ပြောင်းဖို့လွယ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြလို့ရပါတယ်။ Date တစ်ခုကို Set လုပ်ပြီး Internet Campaign တစ်ခုအနေနဲ့ အားလုံးပြောင်းကြမယ်ဆိုရင် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ အဲဒီလို ပြောင်းတဲ့အခါမှာ User တွေကို Technical ပိုင်းက အကူအညီပေးမယ့် Team တစ်ခုက Ready ရှိနေဖို့တော့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုက မြန်မာနိုင်ငံထဲက Team တွေက အင်တာနက် ကဖေးတွေကို Technical Support ပေးပြီး ကင်န်ပိန်းထဲမှာ ပါဖို့ ဆွဲဆောင်ပေးနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ကွျန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးများ သံယောဇဉ် အလွန်ကြီးတတ်ကြသလို အလွန်အရိုးစွဲတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ Unicode 5.1 Conversion မှာ ဇော်ဂျီ ကို ဖယ်ထုတ်ခဲ့လို့မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ဇော်ဂျီရဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကွျန်တော် အကြံပေးချင်တာက Alpha အနေနဲ့လည်း Zawgyi 5.1 ပဲခေါ်ခေါ်၊ Zawgyi-two ပဲခေါ်ခေါ် 5.1 Compatible ဖြစ်တဲ့ ဖောင့်တစ်ခုကို User တွေအတွက် ထုတ်ပေးနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ အဲဒီလို ဖောင့်အသစ် စီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Alpha ကိုယ်တိုင်က ဦးဆောင်ပြီး Campaign ကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတွင်ကျယ်မှာ သေချာပါတယ်။
အမေရိကန်လို နိုင်ငံမျိုးတောင် သူတို့ထွင်ထားတဲ့ CDMA-2000 စနစ်ကို ဘေးဖယ်ပြီး တကမ္ဘာလုံးသုံးတဲ့ GSM နောက်ကို လိုက်ရသေးတာ ကွျန်တော်တို့လည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထွင်ထားတဲ့ De facto စနစ်တွေကို ဘေးဖယ်ပြီး တကမ္ဘာလုံးသုံးတဲ့ Unicode Standard နောက်ကို လိုက်ကြရအောင်ပါ။ တဖြည်းဖြည်း မီးမြှိုက်ခံရတဲ့ ဖားတွေလို အသေခံကြမယ့်အစား လုပ်သင့်တာကို ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြရအောင်ပါ။ Personal Hatred တွေ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတွေ အားလုံးဘေးဖယ်ထားပြီး အနာဂတ်အတွက် အားလုံးတက်ညီလက်ညီ လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Ngwe Tun (Solveware Solution) at 1:40 AM0comments
How to put converter box in Wordpress
For the WordPress User.
Find > Page Template, Main Index Template in right side.
Then put following line in text box.
Posted by Ngwe Tun (Solveware Solution) at 11:57 PM 1 comments
How to put Convertor Combo Box?
Open Template and put one line between *head* and *body* tag like this;
Posted by Ngwe Tun (Solveware Solution) at 12:54 AM0comments
Myanmar Unicode နဲ့ ပက်သက်ပြီး နားလည်မိသမျှ
မြန်မာအိုင်တီပရိုမှာ ယူနီကုဒ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရင်က အငြင်းပွားကြပါတယ်... အခုလည်း အငြင်းပွားနေကြတုန်းပါပဲ... နောင်လည်း ဆက်ညင်းနေကြဦးမယ့် သဘောမှာ ရှိပါတယ်... တစ်ကယ်တော့ ဒီကိစ္စကို ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလေ... လူကြီးတွေ ကောင်းအောင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်... နောက်ဆုံး ရလဒ်တစ်ခုထွက်လာတော့မှ လူကြီးတွေက သုံး ဆိုတာကို သုံးလိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတာပါ... ဒါပေမယ့် အားလုံး စည်းလုံး ညီညွတ်ရမယ့်ကိစ္စမှာ ဘာဖြစ်လို့ ဒီအငြင်းပွားမှုတွေ ရှိနေတာလည်းဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်... စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာရင်းနဲ့ အနည်းအပါးသိလာပါတယ်... အဲ့ဒါလေးတွေကို တင်ပြခွင့်ပြုပါ...
Unicode ဆိုတာ လိုအပ်သလား
လိုတာပေါ့ဗျာ... အခုခေတ်မှာ ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာကို တစ်ခြားသူက Font မရှိလို့ ဖတ်လို့မရဘူးဆိုတာ လုံး၀မဖြစ်သင့်တော့ပါဘူး... စံတစ်ခုကိုသာ Font အားလုံးက လိုက်နာမယ်ဆိုရင် Font တစ်ခုရှိနေတာနဲ့ ဘယ် Font ကိုသုံးပြီး ရေးထားရေးထား ဖတ်လို့ ရပါလိ့မ်မယ်... Font ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ အပေါ်ယံ လေးပါပဲ... အခုတော့ Zawgyi နဲ့ ရေးထားရင် Myanmar3 နဲ့ ဖတ်လို့မရပါဘူး... Myanmar3 နဲ့ရေးထားရင် Zawgyi နဲ့ ဖတ်လို့မရပါဘူး... ဘာလို့မရလဲ အားလုံးသိပါတယ်... စံတစ်ခု ရှိနေရဲ့သားနဲ့ Zawgyi က စံကို မလိုက်နာပဲ ထင်သလို လုပ်ထားပါတယ်... Myanmar3 ကတော့ လိုက်နာပါတယ်... အဲ့ဒီမှာ လွဲနေတာပါပဲ... (Font နဲ့ Unicode နဲ့ မကွဲသေးတဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်... ပညာပေးမှုတွေ လိုအပ်နေပါသေးတယ်...)
Unicode ကြောင့် ရနိုင်မယ့် အကျိုး
Unicode စစ်စစ်ကို သုံးလိုက်ရင် ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေက အလွန်ပဲများပြားပါတယ်... အများသိထားတဲ့အတိုင်း Unicode စစ်စစ်က Searchable, Sortable ဖြစ်ပါတယ်... စံတစ်ခုကိုသာ အားလုံးလိုက်နာကြရင် အထက်မှာပြောခဲ့သလို မြန်မာ Font တစ်ခု ရှိနေယုံနဲ့ မြန်မာစာ အားလုံးကို ဖတ်လို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်... တစ်ခြား အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်...
(နောက်ပြီတော့ မြန်မာဆိုတာ ဗမာတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး...ရှမ်း၊ မွန် စတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေလည်း မြန်မာတွေပါပဲ... မြန်မာစာဆိုတဲ့ နေရာမှာ တိုင်းရင်သားတွေကို ထည့်စဉ်းစားရပါမယ်... မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလို့မရပါဘူး... Zawgyi ဆရာသမားတွေ ကောင်းကောင်းသိပါတယ်... သူတို့က တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ code point တွေကို အပိုင်စီးထားပါတယ်... အဲ့ဒါကြောင့် Zawgyi နဲ့ ဘယ်တော့မှ တိုင်းရင်းသား စာတွေ ရိုက်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး... Unicode စစ်ရင် ရပါတယ်... တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပါ ထည့်စဉ်းစားပြီးသားပါ...)
Zawgyi က ဘာကြောင့် စံကို မလိုက်နာတာလဲ
အဲ့ဒါတော့ Zawgyi Developer တွေကို မေးမှပဲ ရမယ်... ခက်တာက သူတို့ကလည်း မရိုးမသားလုပ်ထားတဲ့ သူတွေဆိုတော့ မျက်နှာမပြရဲ့ကြဘူး... ဒါငါလုပ်တာဟေ့လို့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မပြောရဲ့ကြဘူး... သနားဖို့တော့လည်း ကောင်းပါတယ်... ပင်ပင်ပန်းပန်း လုပ်တုန်းကလုပ်ပြီး ဝန်ခံခွင့် မရကြရှာဘူး... ကွျန်တော်နားလည် သလောက်ဆိုရင် စံကို လိုက်နာဖို့က နည်းပညာပိုင်း အနည်းငယ် အခက်အခဲ ရှိပါတယ်... ဥပမာ- မြန်မာစာမှာ ရရစ် (ြ-) ဆိုတာရှိပါတယ်... စံသတ်မှတ်ချက်အရ ရရစ် တစ်ခုပဲရှိပါတယ်... ဒါပေမယ့် က တို့ အ တို့လို စာလုံးတွေနဲ့ တွဲပြရမယ်ဆိုရင် ရရစ်အကြီး (ကြ) ကို ပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့ ခ၊ င စတဲ့ စာလုံးတွေအတွက် ရရစ်အသေး(ငြ) ကို ပြပေးရမှာပါ... စံသတ်မှတ်ချက်အရ ရရစ် တစ်ခုပဲ ရှိတော့ Font က အလိုလိုနားလည်ပြီး သင့်တော်တဲ့ ရရစ်ကို ပြပေးနိုင်ရပါတယ်... Zawgyiက အဲ့ဒါကို ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ မသိလို့ထင်တယ်... စံက တစ်ခုတည်း သတ်မှတ်ထားပေမယ်... သူတို့က (ြ- ကော ြ-- ပါ) နှစ်ခုစလုံး ယူထားလိုက်ပါတယ်... မြန်မာတွေဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာစာကို ကောင်းကောင်းနားမလည်တော့ ဇမျဉ်းစွဲ နဲ့ စလုံး ယပင့် (ဈ) ကို အတူတူလို့ ယူဆကြပါသေးတယ်... မြန်မာစာရဲ့ သဘောကို အားလုံးသိပါတယ်... [ သဝေထိုး ကကြီး ရရစ် ရေးချ ငသတ် ကြောင်း ရှေ့က ဝစ်ဆန်နှစ်လုံးပေါက် ကြောင်း ] ဆိုတာ သူငယ်တန်း ကလေးကအစ သိပါတယ်... ဒါပေမယ့် Zawgyi က ကကြီး ရိုက်ပြီးမှာ ရရစ်ရိုက်ရင် (ကြ--) ကြ လို မှန်မှန်ကန်ကန် မပြနိုင်တော့ ရရစ်ကို အရင်ရိုက်ရပါတယ်... ပြီးမှ ကကြီးရိုက်ရပါတယ်... အားလုံးသိပြီးသားပါ... မဆင်ပြေအောင် မလုပ်တက်တိုင်း မြန်မာတို့ရဲ့ရိုးရာ မြန်မာစာကို ဖျက်ဆီးတာပါပဲ... ဒီလောက်ဆိုရင် Zawgyi က ဘာလို့ စံကို မလိုက်နာ(နိုင်)တာလဲ သိလောက်ပါပြီ... မှားနေရင်လည်း Zawgyi ဆရာသမားတွေ ဝင်ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်... (အဲ့ဒါတောင်မှ Zawgyi ရဲ့ နည်းပညာ အရမ်းမြင့်ပါတယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်... အံ့ပါရဲ့... အံ့ပါရဲ့... ;)
ဒါဆို ဘာလို့ Zawgyi ကို လူသုံးများနေတာလဲ
ဒါကတော့ ရှင်းပါတယ်... သူများတွေက စံကိုလိုက်နာဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ သူက အဖြစ်လုပ်ပြီတော့ ဈေးကွက်ထဲကို အမြန်ဖြန့်လိုက်ပါတယ်... အဲ့ဒီတော့ လူတွေက သူ့ကို အရင်စသုံးဖြစ်ပါတယ်... (planet လို နာမည်ကြီး site က စသုံးပြတာလည်းပါပါတယ်) တစ်ကယ် စံကိုလိုက်နာနဲ့ Font တွေ ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ သာမန် (user) တွေက ပြောင်းမသုံးချင်တော့ပါဘူး... ဒါ သဘာဝကျပါတယ်... User တွေအနေနဲ့ကတော့ လတ်တလော ဖတ်လို့ရနေတယ်... အဆင်ပြေနေတယ် ဆိုရင်ပြီးတာပဲလေ... Technical Detail က သူတို့နဲ့မှ မဆိုင်ပဲ... Zawgyiက အဲ့ဒီအချက်ကို အမိအရကိုင်ပြီးတော့ ဈေးကွက်ကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတာပါ...
Unicode ကို လက်ခံဖို့ ဘာလို့ခက်ခဲနေတာလဲ
နှစ်ချက်ရှိပါတယ်... ပထမအချက်က လက်ရှိ web ပေါ်မှာ ပြုပြင်ဖို့ခက်ခဲလောက်အောင် လူတိုင်း Zawgyi သုံးနေကြလို့ပါ... Unicode ကို နားလည်တဲ့ Blogger တစ်ယောက်ကို မေးကြည့်ပါ... မင်းရဲ့ blog ကို Myanmar3 နဲ့ ပြောင်းပါလားလို့... ဘယ်ပြောင်းမလဲ... ပြောင်းလိုက်ရင် နောက်ပိုင်း အကျိုးရှိနိုင်ပေမယ့် သူ့blog ရဲ့ လက်ရှိ popylarity ကျသွားမှာပေါ့... user က ဖတ်လို့ မရတော့ဘူးလေ... ဖတ်ချင်ရင် Myanmar3 ထပ်ထည့်ရမယ်လေ... (Myanmar3 ကို ထပ်ထည့်ဖို့ကြတော့ တစ်ချို့ unicode ကို မလိုလားသူတွေရဲ့ မမှန်သတင်းလွှင့်မှုတွေကြောင့် တွန့်ကြတယ်လေ...) နောက်တစ်ချက်ကတော့ Zawgyi ကြောင့်ပါပဲ... သူတို့က စံကို လိုက်နာဖို့ မကြိုးစားကြသလို စံလိုက်နာတဲ့ Font တွေကို လူတွေသုံးကြမှာကိုလည်း ကြောက်ကြပါသေးတယ်... (unicode standard ်font ကိုသာလူတွေသုံးလာကြရင် Zawgyi ကိုယ်တိုင် standard ကို လိုက်နာရင်တောင်မှ အခုလို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားလို့ ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး)
ဒါဟာ ဘာကြောင့် အခုလို အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာကို
အနည်းအကျဉ်းမြင်သာအောင်ပြောတာပါ... ဆရာကြီးတွေနဲ့ လူကြီးတွေကတော့ သိပြီးသားပါ... Beginner တွေနဲ့ ကွျန်တော့်လို ချာတိတ်တွေ မမှန်သတင်းလွှင့်တဲ့သူတွေရဲ့ အပြောသက်သက်တွေကို ယုံနေမှာစိုးလို့ အခုလို တင်ပြလိုက်တာပါ... တစ်ကယ်ဆိုရင် ဒီ မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ အငြင်းပွားမှုထဲကို ဝင်မပါချင်ပါဘူး...
နောက်ပြီးတော့ သတိထားကြပါ... Standard Unicode ကို လိုက်နာလိုက်ရင် ကွျန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာဟာ အလျှင်အမြန်တိုးတက်လာမှာပါ... ဒီလိုတိုးတက်မှာကို မလိုလားသူတွေနဲ့ အမျိုးသားရေးကိုမကြည့်ပဲ ကိုယ့်အတ္တတစ်ခုတည်းကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး မှားမှန်းသိရက်နဲ့ ကိုယ့် product ကို promote လုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေကသာ Unicode Standard ကို ဆန့်ကျင်နေကြတာပါ...
[ Ei Maung ]
ps: ဘယ်ဘက်မှလိုက်တာမဟုတ်သလို ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး... သာမာန် web developer တစ်ယောက်ပါပဲ... မြင်တာကို မြင်တဲ့အတိုင်းရေးတာပါ... အမှန်တွေပြောလို့ တစ်ချို့ကို ထိခိုက်မိရင်တော့ မတက်နိုင်ပါဘူး..
Posted by Ngwe Tun (Solveware Solution) at 12:15 AM7comments
Ngwe Tun (Solveware Solution)